Muran ka taagan magacaabista golaha wasiirrada federaalka. – Radio Daljir
Muqidsho, July 17 – Madaxda sar sare ee dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya ayaan wali isla meel-dhigin habka magacaabista wasiirrada cusub ee dawladda kaddib markii dhawaan R/wasaare loo magaacay Prof. Cabdiweli M Cali ‘Gaas’ lagana sugayey gole cusub.
M/weynaha, R/wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka ayaa la tilmaamayaa dhawrkii maalmood ee ugu dambeeyey in ay lahaayeen shirar wadatashi ah oo la xiriiray dhismaha dawladda taasoo mas’uuliyiintu marnaba isku-waafaqi waayeen habka xulidda xukuumadda.
Muranka ugu weyn ayaa ka taagan dhinacyada ay ka kala imaanayaan wasiirrada wasaaradaha miisaanka leh sida gudaha, dibadda, dhaqaalaha iyo difaaca taasoo noqotay mushkiladda ugu guda-ballaaran ee loomaaro iyo taag-waayey, madaxdana midkasta waxaa uu suxul-duubka ugu jiraa dhankiisa in ay ka soo baxaan wasiirrada wasaaradaha miisaanka culus.
Xukuumadda cusub ee R/wasaare Prof. Cabdiweli M. Cali ‘Gaas’ ayaa la filayey xilli hore in lagu dhawaaqo hase ahaatee waxaa dhawr jeer dib riday yaraanshaha is-fahamka madaxeed ee ku aaddan magaacbista wasiirrada.
Jimcihii aynu soo dhaafnay ayaa la filayey in si rasmi ah loogu dhawaaqo magacyada wasiirrada cusub hase ahaatee taasi ma aysan dhicin, waxaana warar xog-ogaal ah oo aad ugu dhuul-daloola madaxtooyada Soomaaliya ay sheegayaan maanta ama berri in midkood lagu dhawaaqi doono iyadoo loo badinayo Isniinta berrito ah.